PCB ထုတ်လုပ်ခြင်း - ရွှေတြိဂံ PCB & Technologies Co. , Ltd မှ
PCB ကျွမ်းကျင်သူများက 5000 ကိုအပိုင်းပိုင်းကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့ 1 မှအပိုင်းအစအဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ်ပမာဏများအတွက်တန်ဖိုးနည်း PCBs ကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ PCB ဒီဇိုင်နာများအလားအလာအမှားတွေသည်ဒီဇိုင်းကျော်ကြည့်ရှုပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုအများဆုံး PCB လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများအိမ်များမှာတွေ့ရှိခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်ပို့ဆောင်မှုသေချာစေရန်အလွန်တင်းကျပ်သော PCB manufacturingworkflow လိုက်နာပါ။ ရွှေတြိဂံ PCB ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောဆီမီးကွန်ဒတ်တာ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ပျူတာ, networking နှင့်ဆက်သွယ်ရေး, ကြိုးမဲ့စျေးကွက်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ, စက်မှုနှင့် embedded စနစ်များ, ကွန်ယက်ကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, မော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကစားစရာ, ဓာတ်ခွဲခန်းတူရိယာအဖြစ်, စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားရေး segments များ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးကလာ, စသည်တို့ကိုသင်တို့သည်ငါတို့၏ PCBAmanufacturing နှင့် PCB ပရိသန်ဆောင်မှုအပေါ်အားကိုးနိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနေရာတွင်အဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ရည်ညွှန်းဘို့ငါတို့ဖောက်သည်ဖြစ်ပွားမှုအပိုင်းထားပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့စိတ်ကူးထက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အမြန်တုံ့ပြန်မှု, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းအဆင့်ကိုထိပ်တန်းဖောက်သည်ရှုထောင့်, အရည်အသွေးကတိကဝတ်: ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများအောက်ပါဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
PCB နှင့် PCBA စည်းဝေးပွဲကိုပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်စက်ရုံအဆောက်အဦများအတွက်သန်း 10 ကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရွှေတြိဂံ PCB (အက်ဆစ်ကြေးနီမှတဆင့်-ပေါက်ပန်းကန်, CNC Drilling, PCB စွဲစက်, PCB Mills စက်တောင်စက်, Reflow မီးဖို, Automated Optical စစ်ဆေးရေး (Aoi) Surface , Wave ကိုဂဟေဆက်) နှင့်သင့် PCB နှင့် PCB စည်းဝေးပွဲကိုလိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများအညီပြည့်စုံနိုင်သည့်မှတဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးသိပ္ပံနည်းကျစနစ်, ။
0.1mm ၏အသေးငယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းအရွယ်အစား (~ 4mil)
1 36 အလွှာ
တင်းကျပ် (စံ FR4), Flex ကို, လူမီနီယမ်ကျောထောက်နောက်ခံ။
စသည်တို့ကို FR4 * ရော်ဂျာ, Duriod, Polyimide, CEM1,3,
PCB ထည်အထူတင်းကျပ်နှင့် Flex ကိုများအတွက် 0.2mm အဘို့အ 8mil မှာစတင်။
4 အောင်စကြေးနီမှ 0.4 အောင်စ
3mil ၏အနိမ့် Trace / Space ကို။
Finish ပါဝင်သည်; နှစ်မြှုပ်ခြင်းရွှေ, ငွေ, တင်ခဲအခမဲ့ HASL နှင့် OSP ။
ဘုတ်အဖွဲ့ finish ကိုအရောင်များ; အစိမ်း, အပြာ, အနက်ရောင်, အဝါရောင်, အနီရောင်, အဖြူရောင်။
ကျနော်တို့ PCB လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ၏တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည် (ယေဘုယျ FR-4) သေချာစေရန် A + တန်း copperplate ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ PCBA ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်အတွင်းအလိုအလျောက်ကြေးနီများတွင်လည်းကောင်းလိုင်းများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်တူးဖော်စက် (အမှတ်တံဆိပ်: TMAX) တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှုအာမခံစေရန်။ အားလုံးပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်တစ်ဦးချင်းစီ PCB အတွင်းဆားကစ်ကနေအပြင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်မှ OK ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သေချာစေရန်နောက်ဆက်တွဲအဆင့်မှာအဆင့်မြင့်အော်တိုပျံအာကာသယာဉ်စက် (သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုသည် frame) ကရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ PCB ဒီဇိုင်း၏ကနဦးအဆင့်တွင်အတူ, အချိန်ကိုက်အမြဲအလွန်အရေးပါသည်။ PCB စည်းဝေးပွဲကိုရှေ့ပြေးပုံစံ, ECO (အင်ဂျင်နီယာပြောင်းလဲမှုအမိန့်) နှင့် BGA reballing / rework န်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်-အလှည့်အမြင့်မားဆုံးနှင့် ပတ်သက်. , (တဦးတည်းအပိုင်းအစအဖြစ်အနည်းငယ်သာကဲ့သို့) နေပါစေအလို့ငှာအသံအတိုးအကျယ်နှင့်သင်၏ခဲအချိန်တတ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာရီ 20 PCB နမူနာအမြန်ဝန်ဆောင်မှုပြီးသားတင်းကျပ်သတ်မှတ်ရက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြီးမားတဲ့အများအပြားထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့များများအတွက်ဘဝချွေတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာ pcb ထုတ်လုပ်မှုနှင့် pcb စုရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖျော်ဖြေဖို့တင်းကြပ်နှင့်သန့်စင်ပြီး pcba လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PCBA ပျဉ်ပြားကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့မော်တော်ကား, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ & ကျန်းမာရေး, system ကိုကဒ်နှင့်စားသုံးသူအီလက်ထရောနစ်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ, အမျိုးမျိုး၏ဖောက်သည်များအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့သည်အဝင်ပစ္စည်းများအဆင့်တစ်လျှောက်လုံးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း, Smt, Aoi, ipqc, သို့ကျဆင်းလာခြင်းနှင့် PCBA စမ်းသပ်မှုက ISO အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် IPC-A-610E ၏စံချိန်စံညွှန်းများဖြည့်ဆည်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်, သင့် PCB ရှေ့ပြေးပုံစံကိုကောင်းစွာငါတို့အားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ရေးဆွဲဖြေရှင်းချက်ကိုလက်ခံရရှိချိန် မှစ. အားလုံးနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းကျပ် PDCA စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကထိန်းချုပ်ထားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ကပ်အပ်နှံအင်ဂျင်နီယာများသင်နှင့်အတူအချိန်မီဆက်သွယ်ပြောဆိုနှင့်မည်သည့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ PCBA ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်များမျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်နှင့်မည်သည့်လုပ်ရတဲ့မရှိဘဲသင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကောင်းဆုံး PCB ထုတ်လုပ်သူများနှင့် PCB စည်းဝေးပွဲကိုမိတ်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
(အသေးစိတ်ရုပ်ပုံများသည်ကျေးဇူးပြုပြီး click here)
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည် (ယေဘုယျ FR-4) သေချာစေရန်ထိပ်တန်းစာရွက်ပေးသွင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, အော်တိုကြေးနီများတွင်လည်းကောင်းလိုင်းများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်တူးဖော်စက် (အမှတ်တံဆိပ်: TMAX) တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အစာရှောင်ခြင်းပို့ဆောင်မှုအာမခံစေရန်။ အားလုံးပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်တစ်ဦးချင်းစီ PCB အတွင်းဆားကစ်ကနေအပြင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်မှ OK ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်သေချာစေရန်နောက်ဆက်တွဲအဆင့်မှာအဆင့်မြင့်အော်တိုပျံအာကာသယာဉ်စက် (သို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုသည် frame) ကရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။
အမျိုးမျိုးသော PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ကျနော်တို့ကဤအားလုံးသည်သင်အသေးစားအလတ်စား-ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမိန့်များအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်သောလစဉ် 15000 စတုရန်းမီတာ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြ electroplate လိုင်းများ, တူးဖော်ခြင်းစက်တွေ, ပျံအာကာသယာဉ်, စာသား Screener စတာတွေအပါအဝင် PCB ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်သန်း 10 ကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ။ စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုများအမျိုးမျိုးဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ PCB အမျိုးအစားများအောက်ပါများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်ထုတ်စေ။ ဤနည်းအားဖြင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်န်ဆောင်မှုများမှတဆင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တိုးချဲ့ဖောက်သည်အတူတက်ဖမ်းနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပုံနှိပ် circuit ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု HDI PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လူမီနီယမ် PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
တင်းကျပ် Flex PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကာဗွန်မှင် PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကနေတဆင့်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသင်္ကန်းကပ်လှူပွဲအတွက်
မိုးသည်းထန်စွာကြေးနီ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု impedance PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဘုတ်အဖွဲ့ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် Burn
Mil-spec PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု မော်တော်ကား PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု Network ကိုဆက်သွယ်မှု PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
Backplane PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခမဲ့ PCB ကုန်ထုတ်ဦးဆောင်လမ်းပြ အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ် PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
4 Layer PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု6အလွှာ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု 8 လှာ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
သငျသညျ PCB ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပြီးစီးခဲ့ပါပြီပြီးတာနဲ့အခု BOM စာရင်းအရသိရသည်ဝင်လာသောပစ္စည်းများကိုပွငျဆငျနှင့် PCB စည်းဝေးပွဲကိုအဆင့်ကို start up ဒါမှမဟုတ် PCB ဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အချိန်ပါပဲ။ ဒါ့အပြင်အသေးစိတ်များအတွက်, သင်ပိုမိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။